Motorola waxay ku dhawaaqeysaa Moto G Stylus (2021) cusub, Moto G Power (2021) iyo Moto G Play (2021) | Androidsis
Motorola waxay ku dhawaaqeysaa Moto G Stylus (2021) cusub, Moto G Power (2021) iyo Moto G Play (2021)
Motorola wuxuu go'aansaday bilowga sanadka 2021 inuu ku dhawaaqo wadar ahaan seddex aalad cusub oo cusbooneysiin ah oo ka fekeraya soo gelitaanka bartamaha Moto G Stylus (2021), Moto G Power (2021) iyo Moto G Play (2021). Waxay sidaas sameysaa ka dib daadad badan oo ka mid ah saddexda taleefan oo laga helay ilo kala duwan.
Saddexda ugu awooda badan waa Moto G Stylus, waxaa lagu cusbooneysiiyay shaashad ballaaran, Moto G Power wuxuu la yimid batari muhiim ah Ciyaartuna waxay u taagan tahay soo saarista cod tayo sare leh. Waxay imaan doonaan saacadaha soo socda dhowr suuq markii hore, ka dibna waxay gaari doonaan kuwa kale, oo Spain ka mid tahay.
1 Moto G Stylus (2021), cusboonaysiinta iyo awoodda
2 Moto G Power (2021), oo ah soo gal soo jiidasho leh
3 Moto G Play (2021), heer hoose oo loogu talagalay inuu isticmaalo maalinta oo dhan
Moto G Stylus (2021), cusboonaysiinta iyo awoodda
Saddexda, waa midka ku sharxaya qalabka weyn, Moto G Stylus (2021) wuxuu hayaa naqshad qurxan oo qurux badan iyo dhaldhalaal quruxsan. Shaashaddu waa 6,8 inji oo leh xallinta Full HD + muhiimadduna waxay ku jirtaa Stylus oo lagu dhisay mid ka mid ah dhinacyadeeda.
El Moto G Stylus (2021) wuxuu la yimid processor-ka Snapdragon 768, isbeddelka Snapdragon 765, garaafyada garaafku waa Adreno 615 oo siiya awood, wuxuu kaloo isku daraa 4 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah. Batariga taleefankan waa 4.000 mAh culeyskiisuna waa 10W, aad uma dheereeyo xilliyada.
Terminalkan wuxuu la yimid afar kaamiro, midka ugu weyni waa 48 MP, midka labaadna waa 8 MP xagal ballaadhan, kan saddexaadna waa 2 MP makro iyo kan afraad oo qotodheer 2 MP, hore waa 16 MP. Nidaamku waa Android 10 oo leh interface Motorola, waa aalad 4G ah, oo leh Wi-Fi, Bluetooth iyo akhristaha faraha gadaal.
MUUQAAL 6.8-inch IPS LCD leh HD + xallinta buuxda (2.400 x 1.080 px)
PRORESOR Snapdragon 678
KAAMARKA DAR 48 MP f / 1.7 dareeraha ugu weyn / 8 MP f / 2.2 dareeraha baaxada weyn / 2 MP f / 2.4 dareeraha makro / 2 MP shidma qoto dheer
CAMERA HORE 16 MP f / 2.2
Isku xirnaanta LTE / 4G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS
Qiyaasaha iyo Miisaanka: 170 x 78 x 8.9 mm / 213 garaam
Moto G Power (2021), oo ah soo gal soo jiidasho leh
El Moto G Power (2021) wuxuu ku khamaarayaa guddi dhammaystiran oo aan loo baahnayn jibbaarro, deegaanku waa 6,6 inji oo leh xal HD +. Taleefanka casriga ahi wuxuu gebi ahaanba cusbooneysiinayaa naqshadeynta, dhammaantood wuxuu diiradda saarayaa waayo-aragnimada waxa ay ciyaareyso iyo sharad ku saabsan 5.000 mAh baytari ah oo leh 10W lacag
Moto G Power (2021) waxaad go'aansataa processor Snapdragon 662, maahan mid ka mid ah kuwa cusub laakiin waa mid waxtar badan leh marka ay la socoto Adreno 610 oo ah GPU. Xusuusta RAM waa 3/4 Gigabytes, halka keydinta ay ku sii sugantahay 32/64 GB, oo dhammaantood leh suurtagalnimada in la ballaariyo.
Taleefanka casriga ahi wuxuu ku daraa wadar ahaan saddex dareemayaal, midka ugu weyn waa 48 megapixels, halka ay taageerayaan laba kale, macro ah 2 megapixels iyo seddexaad oo ah moolka 2 megapixels. Wejiga hore waa nooca 8 megapixel selfie ah. Waa taleefan 4G ah, wuxuu kaloo la yimaadaa Wi-Fi, Bluetooth iyo GPS. Akhristaha faraha ayaa sidoo kale gadaal ah.
MOTO G AWOODA (2021)
MUUQAAL 6.6-inch IPS LCD leh HD + xallinta (1.600 x 720 px)
PRORESOR Snapdragon 662
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 32/64 GB oo leh booska MicroSD
KAAMARKA DAR 48 MP Main Sensor / 2 MP Macro Sensor / 2 MP Sensor Qoto dheer
CAMERA HORE 8 MP
BATARY 5.000 Mah
Qiyaasaha iyo Miisaanka 165 x 76 x 9.3 mm / 206 garaam
Moto G Play (2021), heer hoose oo loogu talagalay inuu isticmaalo maalinta oo dhan
El Moto G Play (2021) ayaa u istaagi doona ismaamulka, wuxuu balan qaadayaa inuu yeelanayo ismaamul maalin dhan ah oo bilaa lacag ah, maadaama batteriga uu yahay 5.000 mAh oo xamuulkiisu yahay 10W. Shaashadu waa 6.4 inji oo leh HD + qaraar leh xallinta 1.600 x 720 pixels iyo dhalaal aan ka badnayn 100 nits.
Moto G Ciyaar (2021) wuxuu go'aansaday inuu ku daro processor-ka Snapdragon 460 oo leh sawirka 'Adreno 610 graphics', keydku waa 32 GB, ma jiraan wax hadal ah oo ku saabsan booska, laakiin wax walba waxay muujinayaan inay ku dari doonaan. Batariga kor ku xusan wuxuu la mid yahay kan Moto G Power iyo xaqiiqda ah in kharashka CPU-ga uu aad u hooseeyo waxay ka dhigeysaa xulasho muhiim ah.
Kaamirooyinka gadaal waa labo, midka ugu weyni waa 13 megapixels, ta labaadna waa 2 megapixels oo qoto dheer, halka hore ay tahay 5 megapixels oo keliya. Sidii labadii hore oo kale, waa aalad 4G ah, oo leh Wi-Fi, Bluetooth, GPS iyo aaladda dhageysiga dhegaha. Nidaamku waa Android 10.
MOTO G CIYAAR (2021)
MUUQAAL 6.4-inch IPS LCD leh HD + xallinta (1.600 x 720 pixels)
PRORESOR Snapdragon 460
KAAMARKA DAR 13 MP Main Sensor / Sensor Qoto Dheer MP 2
CAMERA HORE 5 MP
Isku xirnaanta LTE / 4G / Wi-Fi 6 / Bluetooth / GPS
Qiyaasaha iyo Miisaanka 166 x 76 x 9.3 mm / 204 garaam
El Moto G Stylus (2021) wuxuu ku imaan doonaa hal RAM iyo xulasho kaydinta (4/128 GB) $ 299 (244 euro isbeddelka), Moto G Power (2021) oo ah 199 doolar (162 euro isbeddelka) iyo Moto G Play (2021) oo ah 169 doolar (138 euro). Moto G Power (2021) waxaa horey looga heli karaa Amazon, halka helitaanka labada harsan ay noqon doonto maalmaha soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola waxay ku dhawaaqeysaa Moto G Stylus (2021) cusub, Moto G Power (2021) iyo Moto G Play (2021)
[VIDEO] Sida loo adeegsado ogeysiisyada xumbo ee One UI 3.0 ee WhatsApp
Ilkaha ilkaha & Jinniga 2 indho indheyn at Lucasarts 'qabsashada adventures graphic